သိပ္ပံနည်းကျ အဖြေရှာလို့မရသေးတဲ့ Mummy အုတ်ဂူ
22 Jul 2018 . 12:50 AM
အရင်တစ်ပတ်တုန်းက အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဝင်မြို့ဟောင်း Alexandria မှာ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အကြီးဆုံး Mummy အုတ်ဂူဟာ အခုချိန်မှာတော့ သုတေသီတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ နဂိုကတည်းက အုတ်ဂူမဖွင့်ဖို့ အကြီးအကျယ် လွန်ဆွဲပွဲ ကျင်းပခဲ့တာဆိုပေမယ့်လည်း အီဂျစ်ဝန်ကြီးခွင့်ပြုချက်အောက် အခေါင်းပွင့်သွားခဲ့ပါပြီ။ အလျား ၉ ပေ၊ အနံ ၆ ပေနဲ့ အကျယ် ၅ ပေအထိ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ရှေးဟောင်း Mummy အုတ်ဂူထဲမှာ ရုပ်ဝါဒီတွေ မြင်တွေ့လိုက်ရတာက အနီရောင် အရည်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အရိုးစုတွေပါ။
Scientists Witnessed Skeletons Baking in Red Liquid
ဒီ ဖြစ်စဉ်ကို အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို အဓိပတိကောင်စီ ဥက္ကဌ Mostafa Waziri က အရိုးစုတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၄၀၀ (B.C 322) ကတည်းက ရှိနေခဲ့မယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုပြောလို့ရတာလဲဆိုရင် အုတ်ဂူထဲက အရိုးစုတွေဟာ Alexander ရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့ စစ်သည်တွေလို့ ယူဆလို့ရလို့ပါ။ ဒါကို အီဂျစ်ရာဇဝင်အရ နောက်ကြောင်းပြန်ကောက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် Alexandria မြို့တော်ဟာ Alexander The Great ရှင်ဘုရင်ကြီး ခေါင်းချခဲ့တဲ့နယ်မြေ ဖြစ်နေတာလည်းပါပါတယ်။ Alexander မရှိတော့တဲ့ 323 BC နောက်ပိုင်း အီဂျစ်နိုင်ငံကို သစ္စာရှိစစ်သူကြီးတွေ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် သမိုင်းအရ နောက်ဆုံးမင်းဆက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ Cleopatra VII ဟာ BC 30 လောက်မှာ သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။
It was opened from whence it came
မရှေးမနှောင်းဆိုသလို BC 30 ဝန်းကျင်မှာပဲ အီဂျစ်ကို ရောမတွေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး Alexander မျိုးနွယ်တွေမရှိသလောက် ရှားပါးသွားခဲ့တာပါ။ အများစုဟာ နှစ်နိုင်ငံစစ်ပွဲအတွင်းကျဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် အီဂျစ်ကို လက်အောက်ခံတိုင်းပြည်အဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်အတွင်း တော်လှန်ပုန်ကန်မှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဦးမယ်လို့ ယူဆလို့ရလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရိုးစုတွေအားလုံးဟာ လွှတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဆင်နွဲရင်း ကျဆုံးခဲ့ပုံရပြီး ဒီလိုပြောနိုင်တာ အရိုးစုပေါ်မှာ ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ မြှားဒဏ်ရာတွေကြောင့်ပါ။
The Tomb is large enough to carry the size of3men
အခုချိန်မှာ ဘာလို့ အီဂျစ်စစ်သည် ၃ ဦးကို အခေါင်းအကြီးကြီးထဲ မြုပ်နှံထားခဲ့လည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်သေးပါဘူး။ ပထမတုန်းက Mummy ရုပ်အလောင်းဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခဲ့ကြတာဆိုပေမယ့် အုတ်ဂူဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘာ Mummy မှ ထွက်မလာတဲ့အပြင် ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေလည်းမတွေ့ရဘဲ အနီရောင်အရည်လူးနေတဲ့ အရိုးစုတွေက ခေတ်သစ် သိပ္ပံပညာကို စိန်ခေါ်လိုက်သလို ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီလို သွေးလား၊ ဘာလား ဆိုတာ ဓာတုနည်းအရ မခွဲခြားနိုင်သေးသလို အလောင်းကောင်ရဲ့ အပုပ်ရည်ကို သောက်ချင်နေတဲ့လူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။
carbonated Monster-esque energy drink?
အီဂျစ်ရာဇဝင်ဘယ်လိုပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့ အုတ်ဂူဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ Mummy တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာထက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ မျက်မြင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတာက အနီရောင်အရည်တွေ ဘယ်ကရောက်လာသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒါကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Kool-Aid က အဲ့ဒီအရည်တွေဟာ ရေနုတ်မြောင်း ဒါမှမဟုတ် မြေအောက်ရေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးထားပါတယ်။ Mummy အုတ်ဂူဟာ ရေစိမ့်ဝင်လို့ရတဲ့ အပေါက်ငယ်လေးတွေ ပါရှိနေတဲ့အချက်က သက္ကရာဇ် ၂,၀၀၀ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ မြို့တော်တိုးချဲ့မှုကြောင့် အခုလို Mummy ရုပ်အလောင်းတွေ ပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်ရမယ်လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သိပ်ပံနညျးကြ အဖွရှောလို့မရသေးတဲ့ Mummy အုတျဂူ
အရငျတဈပတျတုနျးက အီဂဈြနိုငျငံရဲ့ သမိုငျးဝငျမွို့ဟောငျး Alexandria မှာ ရှာတှခေဲ့တဲ့ အကွီးဆုံး Mummy အုတျဂူဟာ အခုခြိနျမှာတော့ သုတသေီတှအေတှကျ ကွီးမားတဲ့စိနျချေါမှုတဈခု ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ နဂိုကတညျးက အုတျဂူမဖှငျ့ဖို့ အကွီးအကယျြ လှနျဆှဲပှဲ ကငျြးပခဲ့တာဆိုပမေယျ့လညျး အီဂဈြဝနျကွီးခှငျ့ပွုခကျြအောကျ အခေါငျးပှငျ့သှားခဲ့ပါပွီ။ အလြား ၉ ပေ၊ အနံ ၆ ပနေဲ့ အကယျြ ၅ ပအေထိ ထုထညျကွီးမားတဲ့ ရှေးဟောငျး Mummy အုတျဂူထဲမှာ ရုပျဝါဒီတှေ မွငျတှလေို့ကျရတာက အနီရောငျ အရညျဖုံးလှမျးနတေဲ့ အရိုးစုတှပေါ။
ဒီ ဖွဈစဥျကို အီဂဈြနိုငျငံရဲ့ ရှေးဟောငျးသုတသေနဌာန ကွီးကွပျမှုအောကျမှာ ဆောငျရှကျခဲ့သလို အဓိပတိကောငျစီ ဥက်ကဌ Mostafa Waziri က အရိုးစုတှဟော လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး ၂၄၀၀ (B.C 322) ကတညျးက ရှိနခေဲ့မယျလို့ သုံးသပျထားပါတယျ။ ဘာလို့ဒီလိုပွောလို့ရတာလဲဆိုရငျ အုတျဂူထဲက အရိုးစုတှဟော Alexander ရှငျဘုရငျကွီးရဲ့ စဈသညျတှလေို့ ယူဆလို့ရလို့ပါ။ ဒါကို အီဂဈြရာဇဝငျအရ နောကျကွောငျးပွနျကောကျပွီး ပွောရမယျဆိုရငျ Alexandria မွို့တျောဟာ Alexander The Great ရှငျဘုရငျကွီး ခေါငျးခခြဲ့တဲ့နယျမွေ ဖွဈနတောလညျးပါပါတယျ။ Alexander မရှိတော့တဲ့ 323 BC နောကျပိုငျး အီဂဈြနိုငျငံကို သစ်စာရှိစဈသူကွီးတှေ ဆကျလကျအုပျခြုပျခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ သမိုငျးအရ နောကျဆုံးမငျးဆကျလို့ပွောလို့ရတဲ့ Cleopatra VII ဟာ BC 30 လောကျမှာ သတျသသှေားခဲ့ပါတယျ။
မရှေးမနှောငျးဆိုသလို BC 30 ဝနျးကငျြမှာပဲ အီဂဈြကို ရောမတှသေိမျးပိုကျလိုကျတဲ့ အခြိနျကစပွီး Alexander မြိုးနှယျတှမေရှိသလောကျ ရှားပါးသှားခဲ့တာပါ။ အမြားစုဟာ နှဈနိုငျငံစဈပှဲအတှငျးကဆြုံးသှားခဲ့ပွီလို့ ပွောလို့ရပမေယျ့ အီဂဈြကို လကျအောကျခံတိုငျးပွညျအဖွဈ အုပျခြုပျခဲ့စဥျအတှငျး တျောလှနျပုနျကနျမှုတှမှော ပါဝငျခဲ့ဦးမယျလို့ ယူဆလို့ရလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရိုးစုတှအေားလုံးဟာ လှတျလပျရေး တိုကျပှဲဆငျနှဲရငျး ကဆြုံးခဲ့ပုံရပွီး ဒီလိုပွောနိုငျတာ အရိုးစုပျေါမှာ ကနျြရဈနခေဲ့တဲ့ မွှားဒဏျရာတှကွေောငျ့ပါ။
အခုခြိနျမှာ ဘာလို့ အီဂဈြစဈသညျ ၃ ဦးကို အခေါငျးအကွီးကွီးထဲ မွုပျနှံထားခဲ့လညျးဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ဘယျသူမှမဖွနေိုငျသေးပါဘူး။ ပထမတုနျးက Mummy ရုပျအလောငျးဖွဈမယျလို့ ထငျကွေးပေးခဲ့ကွတာဆိုပမေယျ့ အုတျဂူဖှငျ့ပွီးသှားတဲ့အခါမှာတော့ ဘာ Mummy မှ ထှကျမလာတဲ့အပွငျ ရှေ၊ ငှေ၊ ကြောကျသံပတ်တမွားတှလေညျးမတှရေ့ဘဲ အနီရောငျအရညျလူးနတေဲ့ အရိုးစုတှကေ ခတျေသဈ သိပ်ပံပညာကို စိနျချေါလိုကျသလို ဖွဈလာတာပါ။ ဒီလို သှေးလား၊ ဘာလား ဆိုတာ ဓာတုနညျးအရ မခှဲခွားနိုငျသေးသလို အလောငျးကောငျရဲ့ အပုပျရညျကို သောကျခငျြနတေဲ့လူတှလေညျး ဒုနဲ့ဒေးပါ။
အီဂဈြရာဇဝငျဘယျလိုပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့ အုတျဂူဖှငျ့လိုကျပွီးတဲ့အခြိနျမှာတော့ Mummy တကယျရှိတယျဆိုတာထကျ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ မကျြမွငျကွုံတှလေို့ကျရတာက အနီရောငျအရညျတှေ ဘယျကရောကျလာသလဲဆိုတဲ့မေးခှနျးပါ။ ဒါကို ကြှမျးကငျြပညာရှငျ Kool-Aid က အဲ့ဒီအရညျတှဟော ရနေုတျမွောငျး ဒါမှမဟုတျ မွအေောကျရကွေောငျ့ဖွဈမယျလို့ ထငျကွေးပေးထားပါတယျ။ Mummy အုတျဂူဟာ ရစေိမျ့ဝငျလို့ရတဲ့ အပေါကျငယျလေးတှေ ပါရှိနတေဲ့အခကျြက သက်ကရာဇျ ၂,၀၀၀ ရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ မွို့တျောတိုးခြဲ့မှုကွောငျ့ အခုလို Mummy ရုပျအလောငျးတှေ ပကျြစီးသှားခဲ့တာဖွဈရမယျလို့ သုံးသပျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။